I-Semalt Ikhuluma Ngombhalo We-Anchor Over-Optimization
Ukwakha izixhumanisi eziningi ezihlosiwe zokuthunyelwe kwakho kungadla umkhankaso wakho we-intanethi, ungasho ukuthi uthinta izikhundla zakho. Ngokuvamile, ukusebenza kahle ngokubhekisela kukhombisa ukudala izixhumanisi eziningi nenombolo ekhonjiwe yombhalo we-anchor lapho izixhumanisi zithatha inani elibalulekile lokuqukethwe futhi azikwazi ukunikeza inani.
Ukwenza ngcono umbhalo we-anchor kungesihloko esiye sahlaziya izinhloko zeminyaka eminingana egijima. Ababonisi bokuthengisa, abanikazi bewebhu be-e-commerce, nabathengisi bokuqukethwe bavame ukudala izixhumanisi eziningi ezihlosiwe kumawebhusayithi abo, isimo esiholela ezikhundleni eziphansi kulezi zilungiswa. Ukuze ukhulise ukubandakanyeka komsebenzisi wakho futhi ubeke phezulu ku-algorithms, cabanga ngokuxhumanisa amakhasi akho womkhiqizo namakhasi wesigaba ngokufanele.
Nansi umbiko ohlaziyekile wewebhusayithi e-commerce ewenza kahle. Lo mbiko uhlanganisa imibhalo yokubeka ama-31 womkhiqizo wamakhasi namakhasi wesigaba angu-28. Uma kuziwa ku ukumaketha kokuqukethwe , ukuqonda izimfanelo eziyisisekelo zombhalo we-anchor kubaluleke kakhulu. U-Frank Abagnale, i-14 (Semalt uMenenja Wokuphumelela Kwamakhasimende, ikunikeza ukuthi ubheke izici ezilandelayo ezizosiza ukuhlaziya ukuthi izixhumanisi ezinequkethe umbhalo we-anchor zenziwe kahle.
Ibinzana elibalulekile - Hlola ukuthi inkulumo eyinhloko iqukethe umbhalo wokuhlanganisa wokulinganisa
igama lomkhiqizo - ezimweni eziningi, igama lomkhiqizo likhonjiswa njengombhalo we-anchor
i-URL - Hlola ukuthi ngabe isixhumanisi sinombhalo wangempela we-anchor, noma nje i-URL
Ukukhishwa - Hlola ukuthi ngabe umkhiqizo ukhonjiswe yini embhalweni we-anchor
Ama-Non-Targeted Vs. Amathekisthi Anchor Targeted
Embikweni ohlanganisa amakhasi omkhakha angu-28 namakhasi omkhiqizo angu-31, ama-34.6% wezixhumanisi ezikhokhelweyo aqoshiwe..Ngamazwi alula, ama-anchor ahambisanayo aqoshiwe ngo-18.05%, i-URL ibe yi-17.88%, umkhiqizo u-30.84%, ibinzana ku-16.58%. Amathekisthi angama-non-targeted anikezwe ku-16.64%.
Kulesi simo, ukusatshalaliswa kwetheksthi ekhonjiwe okuhlosiwe kanye nombhalo ongahlosiwe awufani. Amakhasi omkhiqizo akhipha amakhasi wesigaba ngokuphathelene nezixhumanisi zamagama kanye nezixhumanisi ezifanayo zomdlalo. Ukusabalalisa kubonisa ukuthi izixhumanisi zomdlalo zendima, futhi izixhumanisi ezifanayo zomdlalo zirekhodile ukwanda kwephesenti okufinyelela ku-4% no-7% ngokulandelana.
Uma kuziwa kumakhasi wesigaba, ukuxhumanisa imishwana emihle namagama angukhiye kuzoba okuncane. Izibalo zibonisa ukuthi izixhumanisi ezidalwe ngu-25% kumakhasi wesigaba zihlosiwe. Isibonelo, 'enye,' imelela ukusatshalaliswa kombhalo okungahlosiwe. Uma kuqhathaniswa nokusatshalaliswa kombhalo we-anchor okungahlosiwe, izixhumanisi ze-URL futhi ziqoshwe ukukhushulwa kwephesenti ka-7% no-5% ngokulandelana. Iningi le-increment elibhalisiwe lilandele igama lomkhiqizo wegama elingukhiye nemishwana. Kubalulekile ukuthi uqaphele ukuthi ukufaniswa komkhiqizo wesigaba kubhalwe ukusatshalaliswa okungaba ngu-12.23%.
Imiphumela ye-optimization ngaphezu komkhankaso wakho we-intanethi
Ukwenza izixhumanisi eziningi kakhulu kokuqukethwe kwakho kuthinta kakhulu izikhundla zakho. Njengomthengisi, cabanga ngokukhula kombhalo we-anchor nokunciphisa inani lezixhumanisi ezihlosiwe ukushaya imakethe yakho ehlosiwe ngesikhathi sangempela.
Ukubaluleka kokulinganisa iphrofayli yakho ejwayelekile akukwazi ukukhishwa. Uma ngabe usebenza emkhankasweni wakho we-SEO futhi igama lakho elingukhiye eliguqukayo lisalokhu lishintsha phansi, cabanga ukudala amathekisthi anchor ahlukahlukene ukuze uthuthukise ukubonakala komkhankaso wakho. Kulokhu, igama elithi 'evamile' lisho incazelo ehlukene yezimboni ezahlukene. Yenza ucwaningo ukuze uthole umbhalo ongcono we-anchor womkhankaso wakho Source .